Giulio Terzi: Dastuurka Somaliya halagu saleeyo dimuquraadiyada Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Giulio Terzi: Dastuurka Somaliya halagu saleeyo dimuquraadiyada Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay soo jeedisay in dastuurka loo sameynayo dalka Soomaaliya uu noqdo mid ku saleysan dimuqraadiyada.
Isaga oo ka hadlayay Shirka kooxda xiriirka Caalamiga ah uga soconaya magaalada Roma ayaa waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Giulio Terzi in loo baahan yahay in dastuurka loo sameynayo Soomaaliya lagu saleeyo dimuqraadiyada.
Waa in dadka oo dhan Muslim iyo Kirishtan ay si xor ah ugu noolaan karaan gudaha Soomaaliya, oo qof walba diintiisa aan la fara gashan oo aan lagu nacin sidaasi waxaa ku jira wanaag iyo is ixtiraam ayuu yiri Giulio Terzi.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Talyaaniga oo ka hadlay kala guurka Soomaaliya ayaa soo jeediyay muhiimada ay leedahay in laga gudbo KMG oo dowlad rasmi ah loo helo Soomaaliya waxii ka dambeeya bisha August taasina waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay sidii lagu heli lahaa.
Talyaaniga waxaa ka soconaya Shir ku saabsan arrimaha Soomaaliya kaasi oo looga hadlayo arrimo ay ka mid tahay rajada laga qabo in dowlad aan KMG aheyn ay yeelato Soomaaliya.